ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ | "အစအဦး၌ ခရစ်တော်၏ မိန့်မြွက်ချက်များ- အခန်း ၃၆" | ကောက်နုတ်ချက် ၅၆ | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
အဲ၊ တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်သည့် ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာလောကရှေ့၌ ပေါ်ထွန်းလေသည်။ မည်သူသည် ကိုယ်တော့်အား ခုခံမှုဖြင့် ချဉ်းကပ်ဝံ့သနည်း။ အားလုံးသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့် တုန်လှုပ်ကြ၏။ အားလုံး လုံးဝ ယုံကြည်လက်ခံကြပြီး၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ထပ်ကာတလဲ တောင်းခံကြ၏။ လူအားလုံး သူ၏ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ကာ နှုတ်ရှိသမျှသည် သူ့ကို ရှိခိုးကြလေသည်။ တိုက်ကြီးများနှင့် သမုဒ္ဒရာများ၊ တောင်များ၊ မြစ်များ- အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ကိုယ်တော့်အား အတောမသတ် ချီးမွမ်းကြသည်။ နွေဦးသမယသည် ၎င်း၏ နွေးထွေးသော လေညင်းများနှင့်အတူ သန့်စင်သော နွေဦးမိုးကို ယူဆောင်လျက် ရောက်လာသည်။ လူအားလုံးကဲ့သို့၊ စမ်းချောင်းများ၏ ရေစီးကြောင်းများသည် ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း မျက်ရည်များ ယိုစီးလျက် ပူဆွေးခြင်းနှင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ဖြင့် စီးဆင်းကြသည်။ မြစ်များ၊ ရေကန်များ၊ ကမ်းခတ်လှိုင်းနှင့် လှိုင်းတံပိုးထခြင်းများ အားလုံးသည် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောနာမကို သီဆိုလျက်၊ ချီးမွမ်းထောပနာပြုလျက် ရှိနေကြသည်။ ချီးမွမ်းခြင်းအသံများမှာ အင်မတန် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့် မြည်ဟည်းထွက်သွား၏။ တစ်ချိန်က စာတန်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဟောင်းသောအရာများ- တစ်ခုစီတိုင်းသည် အသစ်ပြုပြင်ခံရကာ ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝ သစ်လွင်သော နယ်ပယ် တစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်…
ဤသည်မှာ သန့်ရှင်းသော တံပိုးဖြစ်ပြီး စတင်အသံမြည်လေပြီ။ နားစိုက်ထောင် ကြလော့။ အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးသောနိဂုံး ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနှင့် လူတိုင်းအား အသိပေးလျက် အလွန် သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းသော ထိုအသံသည် ပလ္လင်၏ မိန့်မြွက်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာ ပြီးမြောက်ပြီဖြစ်သည်။ ငါ၏ နိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် လူပုံအလယ် ပေါ်ထွန်းလေပြီ။ လောက၏ နိုင်ငံများသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သော ငါ၏ နိုင်ငံတော် ဖြစ်လာကြပေပြီ။ ငါ၏ တံပိုးခုနှစ်လုံးသည် ပလ္လင်မှ အသံမြည်ကာ၊ အင်မတန် အံ့ဩဖွယ် အရာများ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး အစွန်းရှိ လူတို့သည်…ရေခဲတောင်တစ်ခု ပြိုကျသည့် အရှိန်မျိုး၊ မိုးကြိုးတို့၏ အင်အားမျိုးဖြင့် အရပ်ရပ်မှ တစ်ဟုန်ထိုး ပြေးလာကြလိမ့်မည်။…
စစ်မှန်သော အနန္ဒတန်ခိုးရှင်ဘုရား၊ ရာဇ ..ပလ္လင်ပေါ်ကရှင်ဘုရင် စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုး၊ လူအပေါင်းနှင့် တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကို ကြည့်နေသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဘုရားဘုန်းတော်နှင့်တောက်ပ စကြဝဠာ ရှိအရာအားလုံး၊ မြင်တွေ့ကြလိမ့်မည် နေရာတိုင်းမှ သက်ရှိအားလုံး မြင်တွေ့မည် တောင်တန်း၊ မြစ်၊ မြေပြင်၊ ပင်လယ် နှင့် အင်းအိုင် သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံး စစ်မှန်သောဘုရားကိန်းဝပ်ရာအလင်းအောက်တွင် သူတို့ ၏ ကန့်လန့်ကာကိုဖွင့်ကာ ပြန်လည် လန်းဆန်းလာသည် အိပ်မက်ထဲမှ နိုးထအသက်ဝင်လာသလို ဒါမှမဟုတ် အညွှန့်များဟာ မြေဆီမှအလင်းရောင်သို့တိုးထွက်လာသလို အို. ဤကမ္ဘာ စစ်မှန်သောတစ်ဆူတည်းသောဘုရား ပေါ်ထွက်လာပြီ ဘယ်သူကများ သူ့ကို ဆန့်ကျင် ရဲမလဲ အားလုံးဟာ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကာ လက်ခံယုံကြည်ကြလေပြီ သူ့ရှေ့တော်မှောက်တွင် ဒူးထောက်ကြသည် သူတို့ သူ၏ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရန် အဆက်အပြတ် အသနားခံနေပုံကို ရှုမြင်ကြ။ လူတိုင်း ကိုးကွယ်ကြလေသည်
တိုက်ကြီးများနှင့် ပင်လယ်၊ တောင်တန်း၊ မြစ်များ အရာအားလုံးတို့သည် နွေဦးရဲ့ လေပြေဟာလည်း မိုးဖွဲလေးများကို သယ်ဆောင်လာသည်။ လူတွေလိုဘဲ စမ်းချောင်းစီးကြောင်းသည် ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောနှော…အို..လယ်..အို..လယ်.. ကျေးဇူးမျက်ရည်များ ကျလေသည်။ ပြစ်တင်ခြင်းများ နောင်တများ နှင့်အတူ သူတို့ ငိုကြွေးလေသည် မြစ်၊ အိုင်များ၊ လှိုင်းတပိုးများ၊ အားလုံးသီချင်းဆို အားလုံးသီချင်းဆို အားလုံးသီချင်းဆိုကာ ဘုရား၏ သန့်ရှင်းသောနာမကို ချီးမွမ်းသီဆို စာတန် ညစ်ညမ်းစေသော ဟောင်းနွမ်းသည့် အရာတစ်ခုစီတိုင်း အသစ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည် ပျက်စီးခဲ့သော အရာအားလုံး ပြောင်းလဲကြမည် အသစ်သော အခြေနေသို့ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည် အို. ဤ(ကမ္ဘာ)လောကတွင် စစ်မှန်သောတစ်ဆူတည်းသောဘုရား ပေါ်ထွက်လာပြီ ဘယ်သူကများ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ရဲမလဲ အားလုံးဟာ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကာ လက်ခံယုံကြည်ကြလေပြီ သူ့ရှေ့တော်မှောက်တွင် ဒူးထောက်ကြသည် သူတို့ သူ၏ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရန် အဆက်အပြတ် အသနားခံနေပုံကို ရှုမြင်ကြ။ လူတိုင်း ကိုးကွယ်ကြလေသည်
သန့်ရှင်းသောခရာသံ ကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာ နားစိုက်ထောင်ကြသည် ပလ္လင်တော်မှ ချိုသာသော အသံလာကာ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကို ကြေငြာ ထိုအချိန်သည် ရောက်ရှိလို့လာနေပြီ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ် ရောက်လို့လာပြီ ဘုရားစီမံခန့်ခွဲခြင်းအစီအစဉ် ပြီးဆုံးပြီ သူနိုင်ငံတော် မြေပေါ်ရောက်လို့လာပြီ ကမ္ဘာ့တိုင်းနိုင်ငံအားလုံး ဘုရားရှင်၏ နိုင်ငံတော် ဖြစ်လာပြီ အာ….အာ… ပလ္လင်တော်မှ ခရာခုနှစ်ခုသည် အသံထွက်ပေါ်လာသည်။ အံ့ဖွယ်အရာများ ယခု ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်။ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့အသံကြားတဲ့ သူ့လူတွေမြင်ရတာ ဝမ်းမြောက် နေသည် သူတို့ဟာ မြေပြင်၊ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးမှ စုဝေးကြသည် လူအားလုံး စစ်မှန်သောဘုရားကို သူတို့နှုတ်ဖျားတွင်ရှိနေသည် ချီးမွမ်းရင်းကခုန် ချီးမွမ်းရင်းကခုန် အဆက်မပြတ် ချီးမွမ်းရင်းကခုန် ဒလဟောစီးဆင်းနေသော ရေကဲ့သို့ ကမ္ဘာကို စစ်မှန်သောဘုရား အကြောင်း သက်သေခံ ဘုရား၏နိုင်ငံတော်တွင် အားလုံးစုဝေးကြမည်